Zambia: Miezaka mafy Hiady Amin’ny Kolikoly ny Mpiserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2011 9:36 GMT
Efa nisy fotoana nanakoako tao Zambia ny hiaka mitaky fanovana; ankehitriny ny antokon'i Michael Sata, Tia Tanindrazana (TT) no nandrava ny fahefana nanjaka ampolony taona, ny antoko Hetsika ho an'ny Demokrasian'ny Antoko-Maro (HDAM), hita fa mizotra mankany amin'ny lalam-baovao i Zambia. Ny hita ho tena mahaliana indrindra dia ny tanjona tokana kinendrin'ny governemanta vaovao amin'ny fiadiana ny kolikoly. Maresaka hatrany ny Zambiana isan'andro amin'ny tsiambaratelo mivoaka, ireo fanambarana ary fanasoketana ihany koa.
Mimenomenona mafy ny mpanao politika teo aloha izay mihevitra fa fandrika ihany izany. Tamin'ny fanehoan-kevitra mikasika ny fanadihadiana tamin'ny fivarotana ny Zamtel, orinasam-pifandraisan-davitra voalohany ao Zambia, nataon'ny governemanta teo aloha, dia nanambara hoe ny Filoha lefitra teo aloha George Kunda: “Mbola tsy nisy mihitsy izany fametrahana vaomiera enina izany, ary tsy fantatsika ny isan'izay mbola hoavy hanatevin-daharana. Fahadisoana hita izany.”
Komisiona Misahana ny Kolikoly (KMK) no sampan-draharaha nitarika ny tolom-panoherana ny kolikoly tao Zambia. Sary avy amin'i E-hustling Visual.
Nandritra izany, miantso rà ny indizeny Zambiana ary mandray anjara amin'izany ihany koa ny Mpiserasera.
@lwangamwilu nilaza hoe:
Mahagaga ny harena be tampoka azo tao anatin'ny 3 taona nataon'ny sasany mpiasa birao, ataovy famotorana izy ireny – Milupi #Zambia
@itayics nanampy hoe:
Crikey! RT @livilodge: RT @sandaykc: FLASH: orinasam-pifandraisandavitra Zambia, ZAMTEL namidy tsy ara-dalàna tamin'ny Libiana Lap Green. #Zambia #Libya
Misy ny mpitondra teo aloha nosamborina, Dora Siliya, minisitry ny Serasera teo aloha tao anatin'ny governemanta Rupiah Banda, nantsoina atao famotorana, ary nisy ny Zambiana no nieritreritra hoe haharitra hafiriana vao hosamborina izy io.
Ny tena fototr'ity fanadihadiana ity dia ny nahazoana ireo fitaovana isan-karazany, anisan'izany ireo bisikileta an-jatony natolotry ny antoko nitondra teo aloha nikarakarana ny fifidianana.
#Zambia, bisikileta 1000 omena ho “ampiasan'olo-tsotra”, nefa nieritreritra fa Andriamanitra irery ihany no hita amin'ny toerana rehetra ao anatin'ny fotoana iray, tsy mampisalasala raha misy fanadihadiana
@stevenputter nanazava ny antony mahasarotra ny ady amin'ny kolikoly ao Zambia:
@livilodge ny olana dia ny fomba hanombohana ny fampiharana ny lalàna sy paik'ady ao #Zambia, manandrana izy ireo ary miady amin'ny kolikoly amin'ny fampiharana ny lalàna, fa tsy nahomby
Na ny zanaka lahin'ny Filoha Banda teo aloha koa aza dia anisan'ny atao famotorana. @sandaykc nanoratra hoe:
Zanaky ny Filoha teo aloha, Henry & Nenani natao famotorana momba ny famatsiam-bola ny fampielezan-kevitra nataon'ny rainy. Antsoina hanatrika famotorana izy mirahalahy roa amin'ity herinandro ity #Zambia
Mpisera tweet hafa nanontany raha nanao famotorana mikasika ny fiavian'ireo vato sarobidin'ny Zambia hita ao amin'ny ebay ny governemanta :
@mwanabibi: Tsy fantatro raha nivoaka an-tsokosoko tao Zambia izy ireo saingy fantatra fa toa ao amin'ny Ebay avokoa ny vatosoantsika avy any India @rphoenixzambia
Manao ahoana ny fampiharana ny kolikoly ao Zambia?:
Ao #zambia ihany ny olona no mandevina ny K2.1 miliara. Mba tafahemony ny nahasamborana azy farafaharatsiny. Kolikoly izany!
Toa miditra lalindalina kokoa ny ady amin'ny kolikoly satria manohy manadihady izay rehetra fantany fa manam-baovao azo antoka momba ny fanodikodinana volam-panjakana ny manam-pahefana Zambiana. Nitatitra ny Zambia Post vao haingana fa, “nilaza tamin'ny polisy ny Lehiben'ny mpampanoa lalàna Mumba Malila haka ny fiara maherin'ny 80 an'ny antoko (HDAM) satria volam-panjakana no nividian'izy ireo izany.”
Mazava tokoa izao fa mbola maro ny asa miandry tokony atao ary mbola tsy vita ny tantara fa mbola tsy mandranitra ny nifiny ny TT amin'izao fametrahany lamina vaovao amin'ny politika Zambiana izao.